Football Khabar » मेस्सीमाथि फेरि खनिए म्याराडोना, हाने यस्तो कडा व्यंग्य !
मेस्सीमाथि फेरि खनिए म्याराडोना, हाने यस्तो कडा व्यंग्य !
अर्जेन्टिनालाई विश्वकपको उपाधि जिताएका लिजेन्ड डिएगो म्याराडोना बेला–बेला आफ्नो देशका सुपरस्टार लिओनल मेस्सीको चर्को आलोचनामा उत्रिने गर्छन् । त्यसो त उनले बेला–बेला मेस्सीको तारिफ गर्दै उनीबिना अर्जेन्टिनी टोली केही नभएको समेत बताउँछन् ।
केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै म्याराडोनाले मेस्सीलाई ‘खेलअघि नर्भस भएर २० पटकसम्म बाथरुम जाने कप्तान’ भनेर आलोचना गरेका थिए । तर, पछि उनले आफ्नो भनाइको अर्थ अर्कै रहेको भने सच्च्याएका थिए ।
फेरि उनै म्याराडोनाले मेस्सी र अर्जेन्टिनी टिमको चर्को आलोचना गरेका छन् । ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा मेस्सीको कप्तानीमा अर्जेन्टिना कोलम्बियासँग २–० ले हारेपछि मेस्सी र टिमको चर्को आलोचना जारी छ ।
यस्तैमा म्याराडोना पनि मेस्सी र अर्जेन्टिनी टोलीको आलोचनामा उत्रिएका हुन् । उपाधि जित्ने दौडमा रहेको अर्जेन्टिना पहिलो खेलमै नमिठो हारको सिकार भएपछि म्याराडोना रिसाएका छन् ।
कोलम्बियासँगको पराजयबारे उनले एक अन्तर्वार्तामा ‘मेस्सी आफूहरू सानोभन्दा सानो देशसँग पनि हार्न सक्ने’ मानसिकतामा पुगेको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । म्याराडोनाले भनेका छन्, ‘मेस्सीले यो बुझेका छन्– टोङ्गाले पनि हामीलाई हराउन सक्छ ।’
टोङ्गा विश्वका सबैभन्दा साना देशहरूमध्ये २१औं स्थानको देश हो, जसलाई समुद्री देश भनेर चिनिन्छ । त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो समुद्र टोङ्गाटापुका को नामबाट देशको नाम टोङ्गा राखिएको हो । सो देशको जनसंख्या १ लाख ८ हजार (२०१७ को गणना) छ । यो देश फिफाको वरीयतामा २०२औं स्थानमा छ ।
म्याराडोनाले अर्जेन्टिना अब टोङ्गासँग खेलेर हारे पनि नयाँ कुरा नहुने भन्दै व्यंग्य हानेका हुन् । उनले हालको अर्जेन्टिनी टिमको अवस्था त्योभन्दा गतिलो नरहेको पनि बताएका छन् ।
म्याराडोनाले कोपा जित्ने लक्ष्य बनाउनुभन्दा पहिला आफ्नो समूहमा कतारलाई हराएर देखाउनुपर्ने बताए । कोलम्बियाविरुद्धको खेल र नतिजा ज्यादै लज्जास्पद हो, मैले पूरा खेल हेर्न सकिनँ,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूले हामी उपाधि दाबेदार हौं भन्न छाडेर पहिला कतारको हातबाट बचेर देखाऊन् ।’
कोपामा अर्जेन्टिनाले अब आफ्नो दोस्रो खेल बिहीबार बिहान पराग्वे र आगामी सोमबार बिहान कतारसँग खेल्नेछ ।
प्रकाशित मिति २ असार २०७६, सोमबार १३:०५